တံခါးပိတ်နောက်ကွယ် - Romantic စုံတွဲများအကြားတစ် ဦး ချင်းနှင့်ပူးတွဲရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn On
ရိုမန်းတစ်စုံတွဲများ (2018) အနက်တစ်ဦးချင်းနှင့်ပူးတွဲညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု: ပိတ်ထားသောတံခါးပေါက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ
comments: အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား porn အသုံးပြုမှုကို သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းတွေ့ရှိချက်များကိုမှန်မှန် porn ကိုအသုံးပြုဖို့သူအမြိုးသမီးတစ်ဦးအလွန်သေးငယ်သောရာခိုင်နှုန်းအပေါ်အခြေပြုနေသည်ဒါမှန်မှန် porn အသုံးပြုဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသမီး%, အလွန်မြင့်မားသည်မဟုတ်။ အကြီးဆုံးကနေ cross-section ဒေတာ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ် အမေရိကန်စစ်တမ်း (အထွေထွေလူမှုစစ်တမ်း) ထိုအစီရင်ခံတင်ပြ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသမီးသာ 2.6% သည်လွန်ခဲ့သောလတွင်တစ်ဦး "ညစ်ညမ်း website မှာ" သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ပိုပြီးမြင်ဘို့ 2000, 2002, 2004 (ထံမှဒေတာများ ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အိမ်ထောင်ရေး, 2014).
Willoughby, ဘရိုင်ယန်ဂျေများနှင့်ပရောဖက်နာသန်ဃ Leonhardt ။
လိင်သုတေသနဂျာနယ် (2018): 1-15 ။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်အကြားအသင်းအဖွဲ့များအပေါ်အများစုကယခင်သုတေသနသုခချမ်းသာကိုအမှန်တကယ်ရင်ခုန်စရာစုံတွဲများအတွင်းညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ dyadic သဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ပညာရှင်များ '' စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားဘူးသောတစ်ဦးချင်းဒေတာအစုံအသုံးပြုသွားမည်သိရသည်။ 240 တစ် dyadic ဒေတာအစုကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကနေလိင်ကွဲစုံတွဲကျူးလွန်အသုံးပြုခြင်း, ငါတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒိုင်းနမစ်နှင့် relational သုခချမ်းသာအကြားသရုပ်ဆောင်နှင့်မိတ်ဖက်အသင်းအဖွဲ့များစူးစမ်း။ ငါတို့သည်လည်းသုခချမ်းသာနှင့်အတူဆက်နွယ်ခဲ့ကြပုံကိုစုံတွဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်အသိပညာစူးစမ်း။ ရလဒ်များအမျိုးသမီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုမြင့်မားအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒမကအခြားမှီခို variable တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ အထီးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုလျော့နည်းသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှု, နိမ့်အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အနိမ့်အထီးအပြုသဘောဆက်သွယ်ရေးအပါအဝင်အပျက်သဘောကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းညွှန်းကိန်း၏ကျယ်ပြန့်ခင်းကျင်းတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုမိတ်ဖက်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကအခြားသုခချမ်းသာညွှန်းကိန်းနှစ်ခုလုံးအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအစီရင်ခံဖော်ပြထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုမှုမိတ်ဖက်အသိပညာသုခချမ်းသာနှင့်အတူနည်းနည်းတိုက်ရိုက်အသင်းအဖွဲ့ခဲ့ပေမယ့်တချို့သက်သေအထောက်အထားအမည်မသိတစ်ဦးချင်းစီကိုအသုံးပြုခြင်းလျော့နည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုပေမယ့်ပိုပြီးဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြုသည်။ ရလဒ်များလိင်ကွဲစုံတွဲအကြားအသုံးပြုမှု၏ကွဲပြားခြားနားသော configurations ကွဲပြား relational သုခချမ်းသာညွှန်းကိန်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောအကြံပြုအပ်ပါသည်။